. * . * . ကြယ်တစင်း . * . * .: အဆုံးသတ် ၁၃
ငယ်စဉ်ကတည်းကကြောက်ရွံ့ခဲ့ရတဲ့အရာတွေထဲမှာ ကိန်းဂဏန်းတွေလည်းပါခဲ့တယ် .. ဂဏန်းသင်္ချာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကျိုးမပေးတဲ့အပြင် ကျွန်မသိပ်ကြောက်ရတဲ့ ကိန်းဂဏန်းတစ်လုံး ..
နံပါတ် ၁၃ တဲ့ .. ၁၃ ဂဏန်းဟာ ကျွန်မအတွက်ကံဆိုးစေတဲ့ဂဏန်း .. ကျွန်မရဲ့ဘ၀ ကျွန်မရဲ့တစ်သက်တာမှာ ကံဆိုးခြင်းတွေကိုသာ သယ်ဆောင်လာပေးတဲ့နေ့ရက်တိုင်းဟာ ၁၃ ရက်နေ့ ဖြစ်နေတတ်တယ် ..
၁၃.၄.၁၉၉၈ ရက်လေးကတော့ တစ်ရက်တည်းပါပဲ .. အဲဒီနေ့ကစလို့ ကျွန်မရဲ့ ကံကြမ္မာက စုန်းကဝေမတစ်ကောင် အဆက်မပြတ် ကြိမ်စာတွေကိုရွတ်ဆိုနေသလို ကျွန်မအတွက် ကြမ္မာဆိုးတွေစတင်ခဲ့တဲ့နေ့ တစ်နေ့ ဖြစ်ခဲ့တယ် ..
တိုက်ဆိုင်စွာ အဲဒီနေ့ကလည်း ကျွန်မရဲ့ ၁၃နှစ်မြောက်မွေးနေ့ဖြစ်ခဲ့ပြန်တယ် ..
ကျွန်မရဲ့ ၁၃ နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာ မွေးနေ့ပွဲကို ဖေဖေပြန်မရောက်လာခဲ့ဘူး ..
ကျွန်မရဲ့မွေးနေ့ပွဲဟာ မေမေတို့ ဖွားဖွားတို့ရဲ့ ငိုသံတွေနဲ့ အဆုံးသတ်ခဲ့ရတယ် ..
ဖေဖေမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်း ကျွန်မအတွက် မွေးနေ့ပွဲဆိုတာပါ လိုက်ပါသေဆုံးခဲ့တယ် ..
၁၃.၄.၂၀၀၀ (ကျွန်မအားကိုးရာ မှီခိုရာ အရိပ်တစ်ခုနဲ့ ဝေးကွာသွားတဲ့နေ့)
ကျွန်မရဲ့ ဒုတိယ အားကိုးရာ ဖြစ်တဲ့ မေမေ နောက်တစ်အိုးတစ်အိမ်ထူထောင်ခဲ့တဲ့နေ့ပေါ့ ..
ကျွန်ဘ၀မှာ ဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူး .. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သာအားကိုးရတော့မယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်ကိန်းအောင်းခဲ့တယ် ..
နောက်တော့ ကျွန်မ မေ့မေ့ကို နားလည်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ် .. မိန်းမသားဆိုတာ အားကိုးရှာတတ်တဲအမျိုးပဲလေ ..
၁၃.၄.၂၀၀၅ (ကျွန်မ အသက် ၂၀ ပြည့်ပြီ)
မွေးနေ့ပွဲတိုင်းကို ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ တိတ်ဆိတ်စွာ ဖြတ်သန်းရင်းနဲ့ အသက်၂၀ ပြည့်မွေးနေ့မှာတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လျှောက်လည်ခဲ့တယ် .. အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ပြသနာက ဆီးကြိုနေတယ်လေ ..
ပထွေးလုပ်သူနဲ့ ပြသနာအကြီးအကျယ်တက်ပြီး မေ့မေ့ မျက်ရည်တွေကိုကျောခိုင်းပြီး အိမ်ပေါ်က ဆင်းခဲ့တယ် ..
ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်တော့မယ်လို့ စိတ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ် ..
ကျွန်မနောက်ထပ်ဖြတ်သန်းရမယ့်နေ့ရက်တိုင်းက ခြောက်ကပ်မှု အထီးကျန်မှုတွေနဲ့ ကြိုဆိုနေတယ် ..
ကျွန်မအတွက် ပျော်ရွှင်မှုဆိုတဲ့အရာရဲ့ နောက်မှာ အမြဲတမ်း အငိုနဲ့ အဆုံးသတ်ခဲ့ရတာချည်းပဲ .. ဒါကြောင့် ကျွန်မပျော်ရမှာကြောက်လာတယ် .. ကျွန်မ မပျော်ရဲတော့ဘူး ..
ကျွန်မရဲ့မွေးနေ့တိုင်းမပျော်ရွှင်ဖို့ စိတ်ဆင်းရဲစွာနဲ့ ဖြတ်သန်းဖို့ ဘယ်နတ်ဆိုးကများ ကြိမ်စာတိုက်ခဲ့ပါလိမ့်နော် .. ကျွန်မဘ၀ကို နာကျည်းမှုတွေ နဲ့ သာဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ် ..
မနက်ဖြန်ဆို ကျွန်မအသက် ၂၁ ပြည့်ပြီ .. ဘယ်လိုကံကြမ္မာဆိုးကများစောင့်ကြိုနေသေးလဲ .. ကျွန်မ ရင်ထိတ်စွာနဲ့ ကျော်ဖြတ်ရဦးမယ် ..
နာရီက ည ၁၂ နာရီထိုးဖို့ကို တစ်ရွေ့ရွေ့ ခရီးဆက်နေတယ် .. ကျွန်မတိတ်ဆိတ်စွာ တစ်ယောက်တည်းအထီးကျန်စွာ ၁၃ ရက်နေ့ကုန်ဆုံးသွားဖို့ဆုတောင်းနေမိတယ် ..
နောက်တစ်နေ့ သင်္ကြန်ရက်တွေကို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကုန်ဆုံးခဲ့တယ် .. အဲဒီပထမဆုံး လည်ဖြစ်တဲ့သင်္ကြန်မှာပဲ ကျွန်မအသည်းလေး အအေးမိသွားတယ် ..
ကျွန်မဘ၀အတွက် အရေးပါဆုံးလူတစ်ယောက်ကို ဘုရားသခင်က ကျွန်မရှေ့ပို့ပေးခဲ့တယ် ..
ကိုကိုနဲ့ ကျွန်မဆုံတွေ့ခဲ့ကြတယ် .. ထူးထူးဆန်းဆန်းမဟုတ်ပါဘူး .. ဒီလိုပဲ သင်္ကြန်မှာ နှလုံးသားချင်းခလုတ်တိုက်မိကြတယ်ပေါ့ ..
ကိုကိုနဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့တယ် .. နောက်တော့ တဖြည်းဖြည်းခင်မင်တာထက်ပိုခဲ့တယ် .. သံယောဇဉ်တွေ အထပ်ထပ်ရစ်နှောင်မိကြတယ် ..
နောက်မွေးနေ့တွေကြုံတိုင်းစိုးရွံ့ မိပေမယ့် ကိုကိုအနားမှာရှိတာကြောင့် ကံကြမ္မာနတ်ဆိုး မနှောင့်ယှက်နိုင်ခဲ့ဘူးထင်တယ် .. ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတယ် ..
ကျွန်မကိုကို့ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်မိတယ် .. ကျွန်မဘ၀အတွက် အားကိုးရာဟာ ကိုကိုဆိုတာကိုလည်း ကျွန်မ နားလည်လိုက်တယ် .. တစ်ခုပဲမျှော်လင့်မိပါတယ် .. ကိုကိုသာကျွန်မအနား ထာဝရရှိနေခွင့်ပေးပါ ..
ကိုကိုနဲ့ချစ်သူသက်တမ်း ၁နှစ်ရှိတော့မယ် .. ချစ်သူသက်တမ်းတစ်လျှောက် ကျွန်မရွေးချယ်မှု မှန်ကန်တယ်လို့ ယုံကြည်ခဲ့တယ် .. ကိုကိုဟာ ကြင်နာတတ်သူတစ်ယောက် .. အမြဲတမ်းလည်း ဂရုတစ်စိုက်နဲ့ အရိပ်တကြည့်ကြည့်ကျွန်မကိုချစ်ခဲ့တယ် .. ကျွန်မဟာ အချစ်ငတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ ကိုကိုသာ ကျွန်မရဲ့ တစ်ကမ္ဘာဖြစ်ခဲ့တယ် .. ကျွန်မရဲ့ ကြိမ်စာတွေကို ပျက်ပျယ်စေခဲ့သူဟာလည်း ကိုကိုပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ် .. ကျွန်မ သိပ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုကိုရယ် ..
ကိုကို့ရဲ့ အချစ်တွေမှာ ပျော်မွေ့နေပြီး လှည့်စားတတ်တဲ့ ကံကြမ္မာကို ကျွန်မ မေ့နေတယ်လေ .. ဒါပေမယ့် တစ်နေ့မှာတော့ .. ကျွန်မရုံးပြန်တိုင်း မပျက်မကွက် အချိန်မှန်လာကြိုနေကျ ကိုကိုမရောက်လာတဲ့နေ့မှာတော့ ကျွန်မ စိတ်ပူပြီးကိုကို့ ဖုန်းကိုလှမ်းဆက်လိုက်တယ် .. ဆက်သွယ်မှုဧရိယာပြင်ပကိုရောက်နေတယ်တဲ့ ..စိတ်လေးလံစွာနဲ့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ် .. အဲဒီနေ့ တစ်ညလုံးကိုကို့ဆီဖုန်းခေါ်လို့မရခဲ့ဘူး .. ပြက္ခဒိန် ကိုကြည့်မိတော့ ၁၃.၃.၂၀၀၇
နောက်တစ်နေ့မှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဖုန်းဆက်ခဲ့တယ် .. ကိုကို့ကို ကားပေါ်မှာ ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့ .. ကျွန်မရင်တွေပူလှပြီ .. ဖုန်းလည်းဆက်လို့မရ .. ဘာတွေများဖြစ်နေတာလဲ ကိုကိုရယ် ..နေ့လည်ကျတော့ ကိုကိုဖုန်းဆက်တယ် .. သူ့အဖွားအသည်းအသန်ဖြစ်လို့ ဆေးရုံသွားနေရတယ်တဲ့ .. ကိုကိုဘာပြောပြော ကျွန်မယုံကြည်ပေးနေမှာပါ .. ကိုကို့ကို သိပ်ချစ်လို့ပေါ့ ..အဲဒီနေ့က ကျွန်မ တစ်ခွန်းတော့ပြောလိုက်တယ် .."ကိုကို ငယ်လေးကို ခွဲမသွားပါနဲ့နော် .. ကိုကိုခွဲသွားရင် ငယ်လေးသေမှာ" လို့ပြောတော့ကိုကိုက ဘယ်တော့မှခွဲမသွားဘူးလို့ ကတိပေးခဲ့တယ် .. ကျွန်မယုံကြည်နေပါတယ် ..
အဲဒီနောက်ပိုင်း အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ ကိုကို့ပျက်ကွက်မှုတွေများလာတယ် ..ကျွန်မရဲ့ စိုးရိမ်မှုဒီရေဟာလည်း ပိုမိုမြင့်တက်လာတယ် .. တစ်ယောက်တည်းရူးနေရတဲ့ရက်တွေ အိပ်မပျော်တဲ့ညတွေ .. အိပ်ပျော်သွားရင်လည်း အိပ်မက်ဆိုးတွေကြောင့်လန့်နိုးခဲ့ရတဲ့ညတွေ များလာတယ် ..ကိုကို့ကို ချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲ ကျွန်မသံသယတွေကို မောင်းထုတ်ပစ်ခဲ့တယ် .. ကိုကိုကျွန်မကလွဲပြီး ဘယ်သူ့မှချစ်မှာမဟုတ်ဘူး .. နောက်တစ်နေ့မနက် အိပ်ရာနိုးတော့ ကျွန်မတစ်ကိုယ်လုံးကိုက်ခဲနေတယ် .. ဒီနေ့တော့ ကျွန်မရုံးသွားဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး .. ကိုကို့ဆီဖုန်းဆက်တော့ ကိုကိုဖုန်းပိတ်ထားပြန်တယ် .. ရင်မောလိုက်တာနော် ..နေ့လည်ကျတော့ အိမ်တရားခေါက်သံကြားလို့ အပြင်ထွက်ကြည့်တော့ ကိုကိုဖြစ်နေတယ် .. ကိုကို့ကို မြင်မှ ကျွန်စိတ်တွေဘယ်လိုဖြစ်မှန်းမသိဘူး .. တစ်ချိန်လုံးတင်းထားခဲ့သမျှ ကိုကို့ရင်ခွင်ထဲဝင်ပြီး ၀မ်းပမ်းတနည်းငိုမိတယ် .. ကျွန်မ ကိုကိုမရှိရင် သိပ်အားငယ်တာပဲ .. ညနေစောင်းကျတော့ ကမ်းစပ်ကို နှစ်ယောက်သား လမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့ကြတယ် .. ကိုကို့မျက်နှာမှာ သောက အရိပ်တွေ ကျွန်မ မြင်နေရတယ် .. ဘာမှန်းမသိပေမယ့် ကျွန်မခံစားရတာက .. ရင်တွေပူလိုက်တာ .."ကို ငယ်လေးကိုပြောစရာရှိတယ် .. ဟိုခုံလေးမှာ ခဏထိုင်ရအောင် .." ကျွန်မငြိမ်သက်စွာနဲ့ကိုကိုနောက်ကလိုက်ပါလာခဲ့တယ် ..ကျွန်မကိုလူတွေလှည့်လှည့်ကြည့်သွားကြတယ် .. ကျွန်မ ရင်ခုန်သံတွေသိပ်ကျယ်လို့ထင်တယ် ..
ကန်စပ်မှာထိုင်နေတာတော်တော်ကြာပြီ .. ကိုကိုကစကားမစသလို ကျွန်မလည်း ဘာစကားမှပြောမထွက်ခဲ့ဘူး .. ကျွန်မရင်တွေခုန်လှပြီကိုကိုရယ် ..ကိုကိုတစ်ခုခုကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့ပုံနဲ့ ကျွန်မဘက်လှည့်ကြည့်တယ် .. ပြီးတော့
"ရှင် .. ကိုကိုပြောပါ .. ငယ်လေးနားထောင်နေပါတယ် .."
"ငယ်လေး ပိန်သွားတယ်နော် .."
"ငယ်လေးကိုပြောစရာရှိတယ် .. ပြောဖို့လည်း စိတ်မကောင်းဘူး .. ကိုကိုအိမ်က သဘောတူစေ့စပ်ထားတဲ့ ၀ဒီဆိုတဲ့ မိန်းကလေးနဲ့ ကိုကိုလက်ထပ်ရတော့မယ် .. ငယ်လေးကို ကြိုမပြောခဲ့မိတာခွင့်လွှတ်ပါ .. ၀ဒီနဲ့က ငယ်လေးနဲ့မတွေ့ခင်ကတည်းက လူကြီးချင်းစေ့စပ်ထားတာ .. ၀ဒီ နိုင်ငံခြားကို ပညာတော်သင်သွားနေတုန်း ငယ်လေးကိုတွေ့ခဲ့တာ .. ကို့ကိုယ်ခွင့်လွှတ်ပါကွာ .."
"………….." ကျွန်မပါးစပ်က အာစေးကပ်သလို ဘာစကားလုံးမှ မထွက်ကျလာတော့ဘူး ..
"ကိုကိုငယ်လေးကိုချစ်ပါတယ် .. ဒါပေမယ့် ၀ဒီကိုပဲ လက်ထပ်ရလိမ့်မယ် .. ငယ်လေးကို စိတ်ထဲမှာ အမြဲတမ်း သတိရနေမှာပါ .. ကို ငယ်လေးကို သိပ်ချစ်ပါတယ် .. ပြောဖို့လည်းအကြိမ်ကြိမ်စဉ်းစားခဲ့ပါတယ် .. ကိုယ်ပြောမထွက်ခဲ့ဘူး .."
သြော် ကိုကိုရယ် ဒါက မိန်းမတစ်ယောက်ကို လမ်းခွဲခါနီး နှစ်သိမ့်တဲ့စကားလုံးဆိုတာ ငယ်လေးသိတာပေါ့ .. ကိုကိုက ကျွန်မကို လှည့်စားနေခဲ့တာပဲ .. ကိုကို့အကြင်နာတွေအားလုံးဟာအတုအယောင်တွေပဲ .. ဒီနောက်ပိုင်းလည်း ကိုကိုစကားတွေအများကြီးပြောခဲ့တယ် .. ကျွန်မ ကြားတစ်ချက် မကြားတစ်ချက် ကျွန်မ လောကကြီးနဲ့ အဆက်အသွယ် ခဏပြတ်သွားတယ် .. ကျွန်မသတိရတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မ ဆေးရုံပေါ်ရောက်နေပြီ .. ဘေးနားမှာ နပ်စ်မလေးတစ်ယော်ကလွဲပြီး ဘယ်သူမှမရှိဘူး .. ကျွန်မ အားငယ်လိုက်တာ ကိုကိုရယ် .. ကိုကို့ကိုပဲ တမ်းတနေမိတယ် .. ကိုကိုမရှိပဲ ကျွန်မဘ၀ကို ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ရမလဲ .. တွေးရင်း မျက်ရည်ကျမိတယ် ..
ကျွန်မ ဆေးရုံမှာ ရှိနေတဲ့အချိန်တွေ .. ကိုကိုတစ်ရက်မှရောက်မလာခဲ့ဘူး .. ကျွန်မရင်ဘတ်က တဖြစ်ဖြစ်နဲ့ မီးတောက်နေသလိုပဲ .. ကျွန်မအသည်းတွေ ကျွမ်းတော့မယ် .. တစ်ယောက်တည်းရှိနေစဉ်တွေမှာ ကိုကို့အကြောင်းစဉ်းစားတိုင်း ရင်နာရတယ် .. ယုံကြည်မှုကို အလွဲသုံးစားသူတစ်ယောက်အဖြစ် ကိုကို့ကို မုန်းတီးနေမိတယ် .. ကျွန်မ မခံစားနိုင်တော့ဘူး .. ရူးတော့မယ် ..
ဆေးရုံဆင်းခွင့်ရပြီတဲ့ .. ကိုကို့ကို ဆေးရုံအခန်းပေါက်ဝမှာတွေ့လိုက်တယ် ..
"ငယ်လေး .. ဆေးရုံဆင်းလို့ရပြီ .. ကိုယ်လိုက်ပို့ပေးမယ် .." ကိုကို့အပြုံးကတော့ အရင်လို နူးညံ့တုန်းပါပဲ .. မနူးညံ့တော့တာ ကျွန်မရဲ့ စိတ်ပဲ ..လမ်းတစ်လျှောက်လုံး ကိုကိုက ဘာမှမဖြစ်သလို စကားတွေရွှန်းရွှန်းဝေအောင်ပြောလာခဲ့တယ် .. အိမ်ရောက်တော့ ပစ္စည်းတွေချပြီးတာနဲ့ ..
"ငယ်လေး .. ကိုကို နောက်အပတ်ထဲမှာ လက်ထပ်တော့မယ် .. ငယ်လေးကို တစ်ခါတည်း နှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်နော် .. နောက်ဆို အခုလိုတွေ့ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး .. ငယ်လေး ကိုကို့ကို နားလည်တယ်မလား .."
သြော် ကိုကိုက ကျွန်မကြောင့် သူနဲ့ဝဒီတို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေးပျက်ပြားမှာ စိုးရိမ်နေပုံပဲ .. ဘယ်အချိန်က စပြီး ကိုကို့အတွက် ကျွန်မက အမှိုက်တစ်စ ဖြစ်သွားပါလိမ့်နော် .. ကျွန်မက အရှုပ်ထုပ်ပေါ့ .. ရင်နာလိုက်တာ .. ရင်ဘတ်ထဲကအောင့်အောင့်နေတာ ရောဂါကြောင့်ကို ကျွန်မထင်ခဲ့တာ .. ခုမှ သိတယ် .. ကိုကို့ကြောင့်ကိုး .. ကျွန်မရင်ထဲကတော့ ကိုကိုကရော ဘာလို့ ငယ်လေးကို နားမလည်ခဲ့တာလဲ .. လို့ပြောနေမိတယ် ..
"ကိုပြန်တော့မယ်နော် .. ၀ဒီကို ဈေးမှာ သွားကြိုပေးရဦးမယ် .." ပြောပြီးမှ ကိုကိုစကားမှားသွားသလို ၀ရံတာဖက်မျက်နှာလှည့်သွားတယ် ..ကျွန်မ ကိုကို့နောက်က သိုင်းဖက်လိုက်တယ် ..
"ခဏလေးပါကိုကိုရယ် .. ခဏလေးဒီအတိုင်းနေနေပါနော် .." ပြောရင်း ကျွန်မ မျက်ရည်တွေ အတားအဆီးမရှိကျလာခဲ့တယ် ..
ခဏနေတော့ ကျွန်မကပဲ ကိုကို့ကို သိုင်းဖက်ထားတဲ့ လက်တွေရုတ်လိုက်တယ် .. ပြီးတော့ ..
"ကိုကို ခဏလေးနော် .. ကော်ဖီလေးတော့သောက်သွားပါဦး .. ခဏလေးပါ .." ကိုကိုခေါင်းညိမ့်ပြတယ် ..ကျွန်မ နောက်ဖေးကိုဝင်ပြီး ကော်ဖီဖျော်လိုက်တယ် ..အိမ်ရှေ့ထွက်လာပြီး ကိုကို့ကိုကော်ဖီခွက်ပေးတဲ့လက်တွေ တုန်နေတယ် .. ကိုကိုလှမ်းယူပြီးပြုံးပြတယ် .. ကိုကို့မျက်နှာကအပြုံးကတော့ နွေးထွေးဆဲပါပဲ ..နောက်ဆုံးလက်ကျန်ကော်ဖီကို ကိုကို မော့ချလိုက်တယ် ..
"ကိုကိုသွားတော့မယ်နော် .." တဲ့တခါးဝအရောက်မှာ ကိုကိုယိုင်သွားတယ် .. ကျွန်မကိုလှည့်ကြည့်တယ် .. ကျွန်မရဲ့ အသိစိတ်ကင်းမဲ့နေတဲ့ မျက်လုံးတွေကိုမြင်ပြီး ကျွန်မကို ..
"မင်း ကော်ဖီထဲမှာ ဘာတွေထည့်ထားလဲ .." ကိုကိုကျွန်မဆီကိုလျှောက်လာတယ် .. ကျွန်မအနားမရောက်ခင်ပဲ ကြမ်းပြင်ပေါ်ကိုကို လဲကျသွားတယ် .. ကျွန်မ အသိပြန်ဝင်လာတယ် .. ကိုကို့ကိုလည်း အရမ်းစိုးရိမ်သွားတယ် ..
"ကိုကို .. ကိုကို .. " ကျွန်မ အဆက်မပြတ် ရေရွတ်နေမိတယ် ..
"ကိုကို .. ကိုကို .. "
"ငယ်လေး .. သတိရလာပြီလား .. "
"ကိုကို .. ကိုကိုမသေဘူးနော် .. "
"အာာ .. ငယ်လေးကလည်း ဘာတွေလျှောက်ပြောနေတာလဲ .. ငယ်လေး အဖျားကြီးပြီး သတိလစ်နေတာလေ .. ခုဆို တစ်ပတ်တောင်ရှိတော့မယ် .. ကိုကို့မှာ အဖွားနေမကောင်းတာတောင် မပြုစုအားဘူး .. ငယ်လေးဘေးမှာ တစ်ချိန်လုံးရှိနေတာ .. ငယ်လေး အရမ်းအားနည်းနေတယ် .. ကိုကို့အပြစ်တွေပါ .. အဖွားကိုဂရုစိုက်နေတာနဲ့ ငယ်လေးအပေါ်လစ်ဟင်းသွားတယ် .. ငယ်လေးခုလိုဖြစ်တာလည်း ကိုကို့ကြောင့် .. ကိုကို့ကို ခွင့်လွှတ်နော် .. ငယ်လေး ကို သိပ်ချစ်တယ် .. " ကိုကို့အနမ်းတစ်ပွင့် ကျွန်မနှဖူးပေါ် ဖွဖွလေး .."ကိုကို ငယ်လေးကို တစ်သက်လုံးခွဲမသွားပါနဲ့နော် .. ""ခုတစ်သက်လည်းမခွဲဘူး .. နောက်ဘ၀ဆက်တိုင်းလည်း ငယ်လေးနဲ့ တွေ့ပါစေလို့ ဆုတောင်းတယ် .. ငယ်လေးအတွက် ကိုကို လိုအပ်တယ် .. ကိုကိုသိတယ် .. ငယ်လေးနားက တစ်ဖ၀ါးမှ မခွာတော့ဘူးနော် .. "
တံခါးခေါက်သံတစ်ချက် ဖြည်းငြင်းစွာ ပေါ်လာပြီး တံခါးပွင့်သွားတယ် .. ဂျူတီကုတ်နဲ့ ဆရာဝန်မလေးတစ်ယောက် လက်ထဲမှာ ပန်းစီးတစ်စီးကိုင်လို့ မတ်တပ်ရပ်နေတယ် ..
ကိုကို က "နှင်း .. ၀င်လာလေ .." ပြီးတော့ ငယ်လေးဘက်မျက်နှာမူပြီး
"ငယ်လေး .. ဒါ ကိုကို့ညီမ ၀မ်းကွဲလေး .. ဒီဆေးရုံမှာ အလုပ်ဝင်နေတာလေ .. ဖွားဖွားကိုလည်း သူပဲ ပြုစု ပြီး တာဝန်ယူပေးနေတာပေါ့ .."
နှင်းဆိုတဲ့ မိန်းကလေးက မျက်နှာလေးပြုံးရွှင်စွာနဲ့ ..
"နှင်း လာလိုက်လို့ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သွားပြီထင်တယ် .. မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ငယ်လေးရေ .." ဆိုပြီး လက်ထဲက ပန်းစည်းကမ်းလာတယ် ..
အို .. ဟုတ်သားပဲ .. အမှတ်တမဲ့ ပြက္ခဒိန်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်မမွေးနေ့ (၁၃.၄.၂၀၀၇) တဲ့ .. ကျွန်မယုံကြည်လိုက်ပါပြီ .. ကျွန်မအတွက် ကံဆိုးခြင်းတွေ လွန်မြောက်ခဲ့ပြီ ..
ရေးသားသူ moekhar at 1/07/2009 03:03:00 PM